वा सिकारु जी धेरै नै उचाईमा उभिएर नेपालको सम्झना गर्नु भएकोमा धन्यबाद र यथार्थ यस्तै छ हामी हजारौ बेदनाको पोका लिएर ० लाई एउटा सपनाको महल सम्झेर परदेशिनु पर्छ यस्तै हो धेरै भावनात्मक गहिराईलाई उतार्नु भएछ फेरी फेरी पढ्न पाउँ है त
यस्तै हो यहा कुनै कुराको पनि निस्चित नै छैन। त्यहि कारणले पनि सबै आफ्नो भबिष्य खोज्न बिदेशिन्छन्।
सिकारु जि, के गर्ने ? जिन्दगी त धरापै-धरापमा त छँदैछ । त्यसमा पनि दुई दिनको जिन्दगीमा डेढ दिन चाँही हामी हाम्रो हरेक परिस्तिथिहरुको बाबजुध बिदेशी भूमिलाई नै कर्मथलो बनाई बस्नु पर्ने वाध्यता पनि छ । त्यसैले पनि तपाईंको गजलको शेरको प्रथम पंक्ति मेल खाँदो लाग्यो-
"बन्द शिशिमा मादकताको शराबमा जिन्दगी" ।
एकदमै सहि अनुभूति/कल्पना हो तपाईंको ।
निकै मार्मिक लेख्नुभएछ ।लाखौ नेपालीहरुको ब्यथा।परदेशिनु को पीडा सायद परदेशीएकाहरु लाई मात्र थाहा हुन्छ । अर्काको देशमा आफुले खोजेको जस्तो सबै चाहना अनि स्वतन्त्रता कहिले पनि पाउदैन सकिदैन। तर पनि बाध्यताबश वा केहि न केहि कारणले बिदेशी भुमिलाई कर्मथलो बनाई बसेका हुन्छन् । सायद सकारात्मकसोच,आत्मबिश्वास,दृढ परिश्रम र सहि गन्तब्य लिएर अगाडि बढेमा अवश्य पनि जीवनले पुर्णता पाउला ।
भाइ सुर्य लेखन सैलि सारै राम्रो छ। नेपाल को माया गरि, नेपालि को भाबना लाइ बुझि लेखे को मा धन्याबाद्
राम्रो छ यस्तै यस्तै कुरा हरु लाइ मधय नजर गर्दै लेख्दै जानु अझ राम्रो हुनि छ
भन्छन् यो जिन्दगी नै आफैँमा पीडा हो रे ! यत्तिकै पनि पीडाग्रस्त । झन् सङ्घर्ष, वियोग र उत्पीडनमा जेलिएको जीवन त पीडाग्रस्त हुने नै भयो । सिकारूजीको अनुभूतिपरक लेखाइले त्यो पीडालाई व्यक्तिपरक रूपमा मात्र उजागर गरेको छैन, हरेक विदेशिएका, सङ्घर्षका पिसिएका अभिशप्‍त जीवनको कथा यसमा अँटाएको छ । धरापको यात्रा दु:खदायी मात्र होइन, फलदायी पनि पक्कै हुन्छ ।
र पनि परिबन्द र विवसता त जीवनकै अर्को नाम हो । सोचेका कुरा फ्याट्ट हुने र अनुकूलता मात्र हातलागी हुने भए जीवन जिउनुको कुनै गति हुने थिएन ।
गम्भीर बिषयमा लेख्‍नु भएछ।
विदेशिनु वा नविदेशिनु भन्दा पनि जिवन आफैं संघर्ष भएकोले जिवन रहेसम्म उतार, चडाव परपरिबन्द र विवसताहरु सबैको भागमा आउँछन नै ।
बाँकी कुरा त तपाईको गजलले नै र त्यसमा पनि मतला र मकताले एकदमै सटिक तरिकाले बोलेको छ ।
तपाइको यो लेखको उच्च मुल्याङ्कन गर्न चाहन्छु । यो आवाज तपाइको एक्लो मात्रै नभएर परदेशिनेहरुको सबैको साझा भावना पनि हो । अझै गजलले पुर्ण रुपमा परीस्कृत गरेको छ तपाइको अनुभूतिलाई तर यसरि फैलिएको निरासाको बादललाई भने हटाउनु नै पर्छ है जहाँ भएपनि ।
परिबन्धको खोलभित्र गुम्सिएका रहर खोज्दै
दुख र सुख शाश्वत सत्य हुन् घाम छाया जस्तै ......।र तीनको स्वीकारोक्ति हाम्रो महानता हो, सिकारुजीको मनभित्र सलबलाएका भावनाहरु र त्यसकै छायामा कोरिएको मिठो गज़लले दुखको पक्षको सुन्दर बयान गरेको छ, तपाइले परदेशीको बह बिसाउनु भयो आज...तर यो धराप, यो अनिश्चितता र यो अपूर्णताले पनि एकदिन पूर्णता पाउनेछन र घामरुपी सफलता भेट्नेछन, भन्छन नि प्रतिक्षाको घडी लामो भए पनि बितेर जान्छ ।
मेरा अनुभूतिहरुमा प्रतिकृया स्वरुप प्रदान गर्नु भएको सहानुभूति र हौसालाको लागि सम्पुर्ण मित्रहरुलाई धन्यबाद भन्न चाहन्छु ।
धाइबा जी, दूर्जय जी, दिलिप जी । तपाइहरुले भने झै जिन्दगीमा आइपर्ने उतार चढाव, विबशता र घाम छायाँहरुको मिश्रणले गर्दा नै यी अनुभूतिहरुलाई बिसाउने मौका पाए । पक्कै हो धरापको यात्रा फलदायी हुने कुरामा झिनो आशा मनमा पलाएकै छ ।
साची सही कुरा गर्नु भो - सूर्य प्रसाद जी ! यो मर्माहत ब्यथा र आशंका विदेशिने जोकोही को हुन सक्छ अझ तपाई हामी जस्ता गल्फमा फिरन्ते भएर बस्नु पर्नेहरुको दर्द ठ्याकै उस्तै हुने है !
यस्तै छ परदेशको पिडा साथी । मिठो अनुभूतिहरु